Global Voices teny Malagasy » India: Fipoahana baomba tany Delhi – 2005 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2018 11:41 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Nisy ny fipoahana baomba  voalaza tao amin'ny tanàndehiben'i New Delhi ny herinandro talohan'ny fetibe goavana indrindra tany India – Deepawali  sy Eid  . Nitranga tao amin'ny faritra be mpiantsena indrindra ity fipoahana baomba ity. Hoy ny River's Blue Elephants izay tany amin'ny iray tamin'ireo toerana minitra vitsy monja talohan'ny fipoahana 
Manana ny sarin'ny sasantsasany tamin'ny fipoahana  ny Sepia Mutiny, ary nanome rohy mankany amin'ny Fampitam-baovao mahazatra . Nanana vaovao momba ny laharan'ny finday hiantsoana vonjy sy ireo hopitaly  izay nitondrana ireo naratra i Peter. Hoy ny mpianatra Indoneziana iray ao Delhi  raha nanoratra -
Ny teorian'ny firaisana tsikombakomba , ny hatairana  ary ny fizotran'ny fipoahana  tao Delhi. Nitantara ny fanehoan-kevitr'ireo  bilaogy Indiana sy ireo bilaogera ny DesiPundit . Tena hetsika nivadika nampalahelo tokoa izany. Nivavaka ho an'ireo izay niharan'ity asa fampihorohoroana ity izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/129444/
 Nisy ny fipoahana baomba: http://indianwriting.blogspot.com/2005/10/blasts-in-delhi-and-other-bad-news.html
 tany amin'ny iray tamin'ireo toerana minitra vitsy monja talohan'ny fipoahana: http://riversblueelephants.blogspot.com/2005/10/today-i-had-my-closest-shave-with.html
 sarin'ny sasantsasany tamin'ny fipoahana: http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/002440.html
 vaovao momba ny laharan'ny finday hiantsoana vonjy sy ireo hopitaly: http://zigzackly.blogspot.com/2005/10/delhi-bomb-explosions.html
 Hoy ny mpianatra Indoneziana iray ao Delhi: http://afsyuhud.blogspot.com/2005/10/delhi-bomb-blast-we-are-ok-mom.html
 teorian'ny firaisana tsikombakomba: http://flyingassmonkey.blogspot.com/2005/10/indian-government-says-terrorists-were.html
 fizotran'ny fipoahana: http://o3.indiatimes.com/delhiblasts/archive/2005/10/30/312427.aspx
 Nitantara ny fanehoan-kevitr'ireo: http://www.desipundit.com/2005/10/29/bombs-bay-in-delhi/